Asinalo uvalo ngenye ingqungquthela: abalahlwe yicala | Isolezwe
Asinalo uvalo ngenye ingqungquthela: abalahlwe yicala
Izindaba / 13 September 2017, 1:01pm / MLUNGISI GUMEDE
Umnuz Sihle Zikalala isigungu sakhe esihola i-ANC KwaZulu-Natal esichithwe yinkantolo enkulu eMgungundlovu ngoLwesibili. Isithombe: Motshwari Mofokeng
UBUHOLI be-ANC KwaZulu-Natal obuchithwe yiNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu izolo buthi abunavalo noma kungathiwa akube nenye ingqungquthela.
Ekhuluma nabezindaba ngemuva kwesinqumo senkantolo, umkhulumeli wesigungu sikaKhongolose esichithiwe, uMnuz Mdumiseni Ntuli, uthe abayisabi enye ingqungqutheleni noma kungathiwa ayibe kusasa noma ngonyaka ozayo.
UNtuli uthe bakholwa wukuthi enye inkantolo ingafinyelela esinqumeni esehlukile. Uthe bazoqhubeka nokuba sehhovisi ngoba inkantolo ichithe ingqungquthela, ayihlakazanga ubuholi babo.
Umkhulumeli wesigungu sikaKhongolose esichithiwe, uMnuz Mdumiseni Ntuli
“Ubuholi be-ANC kuzwelonke yibona obuzonquma ukuthi kuzokwenzekani. Siyisigungu sizohlangana sibheke ukuthi sizoya kanjani phambili ngoba siyakholelwa ekutheni ubufakazi esibethule enkantolo mayelana nokuhlala kwengqungquthela ngoNovemba 2015, bunesisindo. Lesi yisinqumo nje senkantolo enkulu, asingabazi ukuthi enye inkantolo enkulu kunalena ingakhipha isinqumo esehlukile,” kusho uNtuli.
Uthe bazophinde bahlangane nobuholi bukazwelonke balubheke udaba.
UNtuli uthe banelungelo lokudlulisa isinqumo zingakapheli izinsuku eziwu-15.
Okhulumela uhlangothi lukaMnuz Senzo Mchunu, obelufake icala, uMnuz Sthembiso Mshengu, uthe bajabule kakhulu ngesinqumo senkantolo, wangeza ngokuthi ubulungiswa benzekile.
UMshengu uthe isinqumo sisho ukuthi i-ANC inethuba lokuzakha kabusha.
Uthe bazohlangana nabameli babo bacubungele indaba yokuthi bazosikhipha kanjani isigungu ebesikhona ehhovisi.
“Sifuna ubuholi be-ANC kuzwelonke bungenelele ngokushesha bakhe isigungu sesikhashana esizolawula isifundazwe,” kusho uMshengu.
Lithula isinqumo ijaji uJerome Mnguni lithe ukuhlala kwengqungquthela yokukhetha ubuholi be-ANC KwaZulu-Natal ngoNovemba 2015 kwakungekho emthethweni kumele kuchithwe.
UMnguni uphinde wathi abamangalelwa kumele bakhokhele nezindleko zecala.
Ngokobufakazi obethulwe enkantolo uNobhala-jikelele we-ANC, uMnuz Gwede Mantashe, ngo-Okthoba 27, 2015, wakhipha umyalelo othi ingqungquthela ayingaqhubeki kodwa lesi sinqumo sabuye saguqulwa ngoNovemba 2, kwathiwa ayihlale ingqungquthela.
Uhlangothi lukaMchunu lwafaka isimangalo, lwabhalela uMantashe lwaphinde lwahlangana ngisho nesigungu esiphezulu siKhongolose eThekwini lapho kwakukhona ngisho noMengameli Jacob Zuma.
Ukumangala kwakuhambisana nemibhikisho eyehlukene eyayilibangise emahhovisi e-ANC esifundazweni. Ngemuva kokungaxazululwa kwesimangalo ngaphakathi enhlanganweni, uhlangothi lukaMchunu lube seluya enkantolo.